Finoana an'i Jesoa Kristy (Foi en Jésus Christ)
“Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra ; koa tsara izany ataonao izany ; ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovitra” (Jakoba 2:19).
“Izay tsy mino an’Andriamanitra dia efa nampandainga Azy, satria tsy mino ny fanambaràna izay nanambaràn’Andriamanitra ny Zanany izy” (1 Jaona 5:10).
“Koa ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy” (Romana 10:17).
“Ny teny ny amin’ny finoana, izay torinay (dia): raha manaiky an’i Jesoa ho Tompo amin’ny vavanao ianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty, dia hovonjena ianao” (Romana 10:8-9).
“Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alàlan’i Jesoa Kristy Tompontsika” (Romana 5:1).
“Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy” (Galatiana 2:20).
“Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy (Andriamanitra)” (Hebreo 11:6).